#MeToo ao Birmania : Fanadihadiana roa mamboraka ny fiantraikan’ny hetsika fanomezam-pitenenana ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2019 7:56 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, Català, Español, Português, English
Ramatoa mpila ravinahitra, Lazing Lu Bu, mitantara fa namidy taminà Sinoa lahy iray izy. Pikantsary avy aminà lahatsary YouTube [fanampin-dohateny : Teo aho vao nahatsapa hoe namidy]
Mihamaro ankehitriny ireo vehivavy avy ao Birmania [fr] no sahy miloa-bava mizara ny fomba niainan-dry zareo ireo herisetra ara-nofo nanjo azy, sy ny tolona ataony mba hampitsaharana ny fanavakavahana noho ny maha-lahy na maha-vavy. Tsy ela akory izay, nivoaka ny fanadihadiana roa nisafidy ny hampivoitra ireo vehivavy sahy maka toerana manohitra ny herisetra sy mitaky ny miralenta.
Ilay fanadihadiana « MeToo Myanmar », novokarin'ny Ivontoerana ho an'ny Asa Fanaovana Gazety ao Myanmar ho an'ny Mizzima TV ary nivoaka tamin'ny Aprily 2019, dia nanadihady momba ny tranganà herisetra ara-nofo eny anivon'ny fiarahamonina birmàna, izay mitohy mamely ireo vehivavy na teo aza ny lalàna nolaniana mba hiarovana ireo tena marefo.
Apongatr'ilay sarimihetsika ireo fijoroana vavolombelona avy amin'ireo vehivavy lasa niharam-boina noho ny varotra olona, ny herisetra an-tokantrano na ny sotasota ara-nofo any amin'ny toerana iasany. Tanisainy indrindra indrindra ny tantaran'ireo tovovavy mpila ravinahitra noterena ho vadin'ireo Sinoa any akaikin'ny sisintany iraisan'i Shina sy Birmania, sy ireo tovovavy naolan'ny olona avy ao anatin'ny fianakaviany ihany, ary nisy hatramin'ny mpitondra fivavahana bodista aza, ary ny tantaran'ireo vady mikatsaka ny hiaina fiainam-baovao taorian'ny fifandraisana nisamboaravoara sy nankarary saina niainan-dry zareo.
Tamin'ny Novambra 2018, ny Tahirimbolan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Mponina (FNUAP) dia namokatra ihany koa sarimihetsika fohy nampitàna ny feon'ireo vehivavy nitantara ny zavatra niainan-dry zareo niaraka tamin'ireo fenitra nanavahana ny lahy sy ny vavy, ny tsy fitoviana ary ny zon'ny vehivavy ao Birmania.
« Izy ireny dia mitrandraka ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'ny maha-loharanon-kerisetra manjo ny vehivavy sy ny ankizivavy azy, sady mitondra ny feon'ireo vehivavy sy lehilahy tsotra nefa koa sady miavaka », hoy ny lahatsoratra iray fampidirana avy amin'ny FNUAP.
Tsipihan'ireo fanadihadiana roa fa ny hetsika erantany #MeToo dia nanainga vehivavy marobe tao Birmania hifanatrika amim-pahasahiana amin'ireo mpanao herisetra amin-dry zareo sy hiampanga ireo herisetra ara-nofo.
Isan'izy ireny i Eain Chit, mpihira iray fantadaza ao amin'ny fireneny, izay milaza ao anatin'ilay lahatsary « MeToo Myanmar » fa matetika izy no mahazo fangatahana hafahafa momba ny resaka firaisana ara-nofo ary efa nisy nanasa azy mba hihira sy handihy an-tranon'olona manokana eo anoloan'ireo mpanankarena mpanjifa.
Taorian'ny nampitàna tranga hafa maro mikasika herisetra atao amin'ny vehivavy, indrindra fa ny sotasota sy daroka, ampahatsiahivin'ilay fanadihadiana ny filàna mampihatra ireo lalàna izay ny tanjony dia ny hiaro ny zon'ireo vehivavy.
Tamin'ny 1997, nanasonia ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana ho Fanafoanana ny Endrika Rehetra isehoan'ny Herisetra manjo ny Vehivavy i Birmania, saingy ireo tantara rehetra voasoritra ao anatin'io fanadihadiana io dia manaporofo fa tsy miasa eto ireo lalàna izay mitodika manokana amin'ny fiarovana ny vehivavy. Ny mifanohitra amin'izay aza, toa mitombo be ny isan'ny fanolànana sy ny endrika herisetra hafa manjo ny vehivavy.
Araka ny tarehimariky ny governemanta, mitombo ny isan'ny tranga fanolànana, 671 tamin'ny 2016 ary 897 tamin'ny 2017.
Iray amin'ireo fanamby goavana atrehan'ny tolona ho an'ny zon'ny vehivavy ny fiadiana amin'ireo fomba fisainan'ny tompomenakely, toy ilay fotokevitra « hpon », izay mametraka ny lehilahy ho ambony laharana, sy hoe miabo kokoa noho ny an'ny vehivavy ny ara-panahin-dry zareo lehilahy. Io tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy io no nanery ireto farany hitazona ny fahanginana rehefa niharan'ny herisetra ara-nofo ry zareo. Io fotokevitra io no niteraka ny firoboroboan'ny kolontsain'ny tahotra, nifamatotra tamin'ny hevitra hoe ny lehilahy dia manana zo natoraly hanao tsindry sy hifehy ireo vehivavy. Saingy nanomboka tamin'ny 2018, ny hetsika #MeToo no nanome hery ireo vehivavy marobe hamerina handinika indray ny fotokevitra hpon.
Tao anaty antsafa iray nifanaovany tamin'ny Tea Circle, vovonana iray ety anaty aterineto mifantoka amin'ireo olana birmàna, tanisain'ilay mpikaroka sady mpikatroka, Aye Thiri Kyawn, ny ohatra iray momba ny fiantraikan'ny #MeToo, tamin'ny taona 2018 :
… nisy tanora vavy vitsivitsy niampanga ampahibemaso olona iray milaza ho mahita ny miafina, ary fantadaza sy notoavin-teny. Nolazain-dry zareo fa nanolana azy ilehio raha tonga nanatona azy ry zareo taona vitsivitsy lasa izay. Tsy nampozin'ny olona marobe tokoa ny fanambaràna imasombahoaka nataon-dry zareo, indrindra raha jerena ny taonan'ireo tovovavy ireo, sy ny lazan'ilay ‘mpahita’.
Ampiany hoe vehivavy marobe koa no niampanga ny talen'ny ONG iray ho nanao sotasota sy herisetra ara-nofo.
Ilay mpikatroka, Kachin May Sabe Phyu, izay nanao antsafa ihany koa ho an'ny Tea Circle, no manazava ireo antony nahatonga ny vehivavy sasantsasany niharan'ny herisetra handray fanapahankevitra hizara ny tantarany :
Niaritra mangina ny hirifiriny ireo vehivavy tao Birmania. Ankehitriny, fantatr'izy ireo hoe tsy hadisoany ny herisetra mihatra amin-dry zareo. Rehefa mandre ny fitantaran'ireo vehivavy hafa, tonga saina ry zareo hoe tsy ho voantantara mihitsy ny tantarany raha tsy ry zareo no manapaka hevitra handray fitenenana.